Guddoomiye Ku xigeenka Baarlamaanka Kenya oo ka hadlay ujeedada socdaalkiisa Somaliland | FooreNews
Home wararka Guddoomiye Ku xigeenka Baarlamaanka Kenya oo ka hadlay ujeedada socdaalkiisa Somaliland
Guddoomiye Ku xigeenka Baarlamaanka Kenya oo ka hadlay ujeedada socdaalkiisa Somaliland
Hargeysa (Foore)- Gudoomiye Ku xigeenka Baarlamaanka Kenya Md. Faarax Macalin, ayaa maanta socdaal shaqo ku yimid Somaliland, waxaanu ku baaqay in wada hadal lagu xaliyo wax uu ugu yeedhay gacan ka hadal ka dhacay meelo ka tirsan Somaliland.
Guddoomiye Ku xigeenka waxa madaarka Hargeysa oo ka soo degay waxa halkaasi ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland waxaanu ka hadlay socdaalkiisa xiligan ee Somaliland waxaanu yidhi “Anigu waxaan u socdaa sidii wixii Soomaali oo dhan horumarkeedii iyo nabadeedii sidii xal aan ahayn gacan qaad loogu heli lahaa sidaasi ayaan anigu aaminsan yahay.”
“Anigu ma doonayo in Soomaaliyi ay isku gacan qaado meel ay joogtaba wixii dhibaato ah ee jiraba wakhtigii wada hadal lagu dhamayn lahaa ayaa la joogaa,hadda dhibaatooyinka ka jira Somaliland gudaheeda iyo gobolada gacan qaadku ka hadlo. Waxaan ku boorinayaa inay isticmaasho deganaansho,”ayuu yidhi Md. Faarax Macalin.
Faarax Macalin oo wax laga weydiiyay aragtidiisa ku wajahan shirka degmada Taleex ayaa ka gaabsaday inuu wax tafaasiil ah ka bixiyo waxase uu tilmaamay inaanu xog badan ka haynin oo ay maqaalo ku tahay.
“Dawlada iyo dadka Somaliland waa dad aan ku kalsoonahay waan ogahay deganaansho iyo culays isticmaalayaan waxaan idinkula talinayaa inaan dhiig dambe oo soomaliya la daadin. Anigu markaan sidaasi leeyahay waxaan ahay Nin Soomaaliya oo qaran kale ka yimid oo Soomaalidu tiro yar ka tahay,”ayuu yidhi Guddoomiye ku xigeenku.
Faarax Macalin oo wax laga weydiiyay farogelinta milatari ee dalkiisu ku qaaday deegaano ka mid ah dalka qalalaasuhu hadheeyay ee Soomaaliya, waxaanu yidhi “Kuma farxayo ninka Soomaaliga ah ee Kenyan-ka ahi inuu arko ciidamo Kenyan ah oo gelaya Soomaaliya laakiin waxay noqotay wax daruuri noqotay oo dhibkii ayaa sii fara batay. Qaxoontigii ayaa boqolaal kun oo qof ku soo galay Kenya. Dhibta nimanka xagirka ah oo inay ummada baabiyaan ku tallo-galay waxaasi oo dhan ayaa nagu khasbay in la galo Soomaaliya, laakiin haddana lagu galo si tartiibsan.”
Previous PostDadweynaha Gabiley oo Banaan bax ku Taageeray Hawl-galkii Ciidamada Somaliland ku galeen Buuhoodle Next PostBerbera: Banaanbax lagu Taageerayo Xukuumada oo ka dhacay